प्यानिक फेस्ट २०२२ समीक्षा: 'केकडाहरू!' एक नासमझ र रमाईलो क्र्याबी प्राणी सुविधा हो - iHorror
घर	हरर सबजेन्सहास्य डर	प्यानिक फेस्ट २०२२ समीक्षा: 'केकडाहरू!' एक नासमझ र रमाईलो क्र्याबी प्राणी सुविधा हो
प्यानिक फेस्ट २०२२ समीक्षा: 'केकडाहरू!' एक नासमझ र रमाईलो क्र्याबी प्राणी सुविधा हो
by जेकब डेभिसन 20 सक्छ, 2022 486 हेराइहरू
को व्यापक सफलता को आधार मा Jaws 1975 मा, हत्यारा समुद्री जीवहरूको लागि भोकाएको बजारबाट बाहिर निकाल्ने प्रयासमा रिप-अफ, नक्कल गर्ने र फलो-अप चलचित्रहरूको एक होस्ट पास भयो। त्यसैले यस्ता फिल्महरु Orca, Piranha, र टेन्टेकलहरू। जस्तै मेमेटिक सफलता संग यो प्रवृत्ति आज सम्म जारी छ शार्कटपस र शार्कनाडो। जबकि शार्कहरू प्राय: अन्य समुद्री जीवनहरूमा प्रेरणाको बिन्दु भएको छ, यदि यो अलि बढी ... अप्रत्याशित थियो भने के हुन्छ?
कथाले एउटा सानो तटीय शहरलाई पछ्याउँछ किनकि यो यसको ठूलो प्रोम रातको लागि तयार हुँदैछ। अपाङ्गता भएका किशोरी प्रतिभा फिलिप (डिलन रिले स्नाइडर) र उसको सबैभन्दा नजिकको साथी र सायद थप म्याडी (एली जेनिंग्स) एउटा ठूलो विज्ञान परियोजनामा ​​काम गर्दैछन् जसले उनीहरूलाई उनीहरूको सानो शहर हम्ड्रमबाट बाहिर निकाल्न र फिलिपलाई आफ्नो खुट्टामा फर्काउन सक्छ। तर पार्टीलाई केही नराम्रोसँग टुक्राउन लागेको छ । आणविक अपशिष्ट उत्परिवर्तित हत्यारा HRSESHOE CRABS को एक समूह! र यी साना हरामीहरूलाई मानव शरीरको भोक छ किनकि तिनीहरू ठूलो र अधिक शक्तिशाली हुन्छन्। यो धेरै ढिलो हुनु अघि, घोडाको नालका क्र्याबहरू बाहिर निकाल्न फिलिप र उहाँको परिवार र साथीहरूको र्यागट्याग समूहमा निर्भर छ!
अक्सर, स्वतन्त्र चलचित्रमा, 'तपाईंको माध्यम भित्र काम गर्न' सिफारिस गरिन्छ र म निश्चित रूपमा भन्न सक्छु कि निर्देशक/लेखक पियर्स बेरोलजाइमर त्यो विभागमा माथि र बाहिर गए। अवश्य पनि, यो कम बजेट हो र CGI को साथ गिलहरूमा क्र्याम गरिएको छ, तर यसले नरक प्राणी सुविधाको रूपमा एक मूर्खको लागि पर्याप्त मात्रामा जोश देखाउँदछ। साथै, सानो Gremlin र क्राइटरहरू स्टाइल क्र्याब शेनानिगनहरू बरु मनमोहक थिए। विशेष गरी जब घोडाको नालको क्र्याबले टर्नटेबल लिन्छ र डीजे गर्न थाल्छ! साना केकडाहरू र उत्परिवर्तित मानव आकारका केकडाहरू बीचको व्यावहारिक FX र कठपुतलीहरू बाहिर खडा हुन्छन् र चलचित्रको शैलीमा फिट हुन्छन्।
कथानक जत्तिकै आधारभूत छ जति महत्त्वपूर्ण मितिमा उत्परिवर्तित जनावरहरूले आक्रमण गर्ने राक्षस चलचित्रहरूको सन्दर्भमा प्राप्त गर्दछ। यस अवस्थामा, प्रोम रात। पात्रहरूको कास्ट राम्रो छ, यदि थोरै स्टक छ। जस्तै फिलिप्स जेठा उप भाइ शिकारी (ब्राइस डर्फी) र सामान्य उदास स्थानीयहरू। स्ट्यान्ड-आउट चरित्र विदेशी मुद्रा विद्यार्थी राडु (चेज प्याजेट) एक राम्रो अर्थको तर कायर किशोर हो जसले हत्यारा क्र्याबहरूसँग पहिलो पटक भेट्छ र आफ्नो सनकी र भारी उच्चारणका कारण मानिसहरूलाई उनीहरूको अस्तित्वको बारेमा विश्वस्त पार्न असफल हुन्छ। उहाँलाई अन्तिम शब्द क्रेडिटको गीतको रूपमा प्राप्त गर्दै!
CRABS! यो कुन चलचित्र हो र यो के बन्न खोजिरहेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउने चलचित्र हो। हत्यारा घोडाको नाल केकडा, विक्षिप्त पात्रहरू, र पर्याप्त मात्रामा रगत र गोर सहितको तल्लो-भ्रो प्राणी विशेषता। र त्यो महान छ! पक्कै पनि सामान्य प्रत्यक्ष भिडियो दैत्य schlock र पहिले नै भित्र निर्मित दर्शकहरु संग एक कदम माथि। र स्पोइलर बिना, केकडाहरू! तपाईंले आउँदै गरेको देख्नुहुने एक विस्फोटक फाइनल फिचर गर्नुहोस्!